နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Nargis နောက်ဆက်တွဲများ...။
ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ မုန်တိုင်းဖြစ်စဉ် တစ်ပိုင်းတစ်စပါ...။
ဆက်သွယ်ရေးက ပြတ်တောက်နေတော့ ရှားရှားပါးပါး တက်လာနိုင်တဲ့ ဒီသတင်းကိုပဲ ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်...။
“မနေ့က မသေခဲ့လို့ ဒီနေ့ xxxxxx
၂ ရက်နေ့က ရုံးစောစောဆင်းလို့ရတယ်ပြောပေမယ့် လုပ်စရာတွေ မပြတ်သေးတာကြောင့် ၄ နာ၇ီကျော်မှ ပြန်လာဖြစ်တယ်။ xxxxx မင်္ဂလာဆောင်တောင် ယောက်ျားပဲ သွားလိုက်တယ်။ မိုးထဲလေထဲကနေ ရွှဲရွဲစိုပြိး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်သော့က မနေ့က ၀တ်ခဲ့တဲ့ ကုတ်အကျီ င်္ထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပြီဆိုတာ သတိရတယ်။
မိုးကလည်း ကြီး...။ ယောက်ျားကိုလည်း ဖုန်းခေါ်မရ ရေရွဲရွဲစိုနဲ့ အိမ်ပေါက်ဝမှာ ငုတ်တုတ် ၄၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရတယ်။
ချမ်းတာနဲ့ လေထဲမိုးထဲ စောစောအိပ်လိုက်တယ်။ တရေးနိုးတော့ ည ၁၁ နာရီ လေတွေ မိုးတွေ ၀ုန်းတိုင်းကြဲနေပါပြီ။ ပြတင်းမှန်က ချောင်းကြည့်တော့ အုန်းပင်တွေယိမ်းထိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ လေတိုက်သံတွေကလည်း တရွီးရွီးနဲ့။
ခနနေတော့ မီးတွေ ပျက်သွားပါရော.......။
ည ၂ နာရီလောက်ကျတော့ အိမ်ပါ သိမ့်ခနဲ သိမ့်ခနဲ ငလျင်လှုပ်သလို လှုပ်တော့ ပြန်နိုးလာပါတယ်။
ခေါင်မိုးသွပ်ချပ်တွေလည်း လန်ကုန်သွားမပြောတတ်ပါဘူး။ မိုးတွေ လည်း ဟိုနားကယို ဒီနားကယို နဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် ရှိသမျှ ပုံးတွေ ခွက်တွေ ခံရတယ်။ သုတ်စရာ ဂျာနယ်တွေ အပုံလိုက်ကို တစ်အိမ်လုံးလိုက်ခင်း..။ အိပ်ယာထဲလည်း မိုးတွေ ယို..။ နံရံနဲ့ ကပ်နေတဲ့ ဗီဒိုတွေလည်း မိုးယိုမှာ စိုးလို့ ပလပ်စတစ်စကြီးတွေ လိုက်အုပ် နဲ့.. ဗျာများနေရတယ်။ အိမ်ထဲရေ၀င်တာတွေလည်း ခပ်တုတ်ရသေးတယ်။
အပြင် ကလည်း ၀ုန်းဒိုင်းတွေ ကြဲနေပါတယ်။ ဘာတွေ ကျကွဲမှန်းမသိတဲ့ တခွမ်းခွမ်း အသံတွေ လည်းကြားနေရတယ်။ သွပ်မိုးတွေပေါ်ကို ဒလိမ့်တုန်းနဲ့ လာလှိမ့်သလို အသံတွေလည်း ထွက်နေပါတယ်။
တော်တော်ကြမ်းတဲ့ နာဂီပါ။ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ကံကောင်းစွာ ဖုန်းလိုင်းက ရနေပါတယ်။ အိမ်ကလူတွေလည်း ငုတ်ထုတ်ထထိုင်နေကြတယ်ဆိုပါတယ်။
ကြောက်လိုက်ရတာများ အသက်ပါ ပါပြီမှတ်တာပဲ။.. နေတာက ခြောက်ထပ်တိုက် အပေါ်ဆုံး။ တိုက်က လှုပ်နေတော့ တိုက်များ ပြိုကျရင် ပြီးပါရော မှတ်တာပဲ ။ အောက်ဆင်းပြေးရအောင်ကလည်း အပြင်မှာက ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ် အုန်းဒိုင်းကျဲနေတာ။
ဒီလောက်ကြီးကြမ်းမယ့်ဟာကို ဘာမှ သတိပေးခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ.. မဲရုံ မဲရုံ မဲရုံဆီသို့ ပဲ တချိန်လုံးလုပ်နေခဲ့တာကို တွေးပြီး ဒေါသတွေ ထွက်နေမိပါတယ်။
မနက် ၅ နာရီလောက်ကျတော့ နည်းနည်း လင်းလာတာမို့ အပြင်ကို မြင်ရပါတယ်။ လေကတော့ ကြမ်းတုန်းပဲ မို့ မှန်ပေါက်ကချောင်းကြည့်ုလိုက်ရင် သွပ်ချပ်ကြီးတွေ တ၀ှီးဝှီးလွင့်နေတာ မြင်နေရတယ်။ သစ်ပင်တွေလည်း ကြိုးတဲ့ဟာကြိုး။ လေသံကြီးကလည်း ရွှီးရွီး နဲ့နေတာပဲ။
ဘုရားခန်းလေးကမိုးလွတ်တော့ အဲနားမှာ ဖျာလေးခင်းပြီး မောမောနဲ့ တမှေးမှေးလိုက်ရသေးတယ်။ လူသံတွေ ကြားတော့ ပြန်နိုးလာတော့ မနက် မိုးလင်းနေပြီ။ လေနည်းနည်း ငြိမ်နေတာမို့.. လူတွေ အပြင်ထွက်ပြီး ရုံးစုရုံးစုနဲ့..စကားတွေ ပြောနေကြပါတယ်။ ရုံးက ဒရိုင်ဘာဆီက ဖုန်းလာတယ်။ ဟန်းဖုန်းနဲ့ ဆက်တာ..။ (လိုင်းဖုန်းတော်တော်များများ ပျက်ကုန်ပါပြီ။ အပင်တွေလဲလို့) သူတို့အိမ်ပေါ် ကုကိုလ်ပင် လဲကျလို့.. ပြားသွားပါသတဲ့.. အိမ်ရှေ့ပိုင်းကို လူတွေ တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဘေးက အဒေါ်အိမ်မှာ ခဏနေရတယ် အကြောင်းကြားပါတယ်။ နောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဆီက ဖုန်းလာပြန်ပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ နေတာမို့ .. အမိုးတွေ ပွင့်ထွက်သွားပြီဆိုပါတယ်။ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး...။ ဟုတ်လား။ စိတ်မကောင်းပါဘူး ပဲပြောရတယ်။
၀မ်းရေးက ရှိသေးတာကြောင့် လေထဲမိုးထဲ ကပဲ ဂတ်စ်မီးဖိုလေးနဲ့ ချက်ပြုတ်စားရတယ်။ အားလုံး ညနေ ၃ နာရီ ခွဲလောက်မှ ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ xxxxxxxxxxxxxx။ ယောက်ျားက မထွက်သင့်သေးဘူး ဆိုလို့.. ပြတင်းပေါက်ကနေဘဲ အပြင်ကိုကြည့်တော့.. ဘုန်းကြီးကျောင်းခေါင်မိုးတွေ လွင့်ထွက်ကုန်တာ.. အပေါက်တွေ အပေါက်တွေ နဲ့.. အင်တာနာတွေအကုန် ကျိုးကျ.. တိုးလိုးတန်းလန်း.. စလောင်းတွေ လည်းကျိုးတဲ့ဟာကျိုး.. တ၀က်တပျက် တန်းလန်းကြီးတွေ ကျတဲ့ဟာကျ .. အလုံးလိုက်ကြီး လမ်းပေါ် ပြုတ်ကျနေတာတွေရော.. တလမ်းလုံး မွစာကြဲနေတာပါပဲ..။
ခေါက်ဆွဲလေး ပြုတ်စားပြီး အရမ်းကို အပြင်ထွက်ချင်နေတာနဲ့ ညနေ ၅ နာရီလောက် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ တားမရတဲ့အဆုံး ယောက်ျားကလည်း သွားချင်ရင်လည်း သွားဆိုပြီး လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူလည်း မိုးယိုတာဘာညာနဲ့ တစ်ညလုံး မအားရတာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့.. တစ်ယောက်တည်း ထွက်ချလာလိုက်တယ်။
နေတာက ဗဟန်းနားဆိုတော့ လမ်းထိပ်ထွက်လိုက်တာနဲ့ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံထဲက သစ်ပင်ကြီးတွေ အတုံးအရုံး လမ်းပေါ်လဲကျပြီးတစ်လမ်းလုံး ရစရာမရှိပါဘူး။ .. တက်စီငှားလို့ရတာနဲ့ ရုံးရှိတဲ့ မြို့ထဲဘက်ထွက်တာ.. လမ်းတိုင်းဟာ သစ်ပင်ကြီးတွေ ပြိုလဲ ထားလို့ ပိတ်နေပါတယ်။ ပြည်လမ်းတစ်လမ်းလုံးလည်း ရစရာမရှိအောင် ပျက်စီးလို့..။ တိုက်တန်းလျားတွေရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် ခေါင်မိုးတွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူး.. ဟောင်းလောင်း.. လူတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲ မသိရ........။
ဓာတ်တိုင်တွေရော သစ်ပင်ကြီးတွေရော အတုံးအရုံးလဲပြီး လမ်းတွေ ဟာ မှတ်မိစရာမရှိအောင် ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒါတွေ ရှင်းဖို့ ဆို အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ်လောက်ကြာနိုင်တယ်။
အဲသည် ဟာကြီးတွေ မရှင်းနိုင်သေးရင် မီးကလည်း ပြန်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖုန်းလိုင်းတွေလည်း တော်တော်များများပျက်ပါတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေ လည်း ချက်ချင်း မဖယ်ရှားနိုင်သေးဘူး။ ဒီမနက် ထပ်ထွက်လာတော့.. အပင်ကြီးတွေ မဖယ်ရှားနိုင်သေးပေမယ့် လမ်းပေါ်လဲကျနေတဲ့ အပိုင်းတွေ လွှဲနဲ့ တိုက်ဖြတ်ထားတော့ တစ်စီးစား သွားလို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။
အိမ်တွေကတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သွပ်ပြားတွေဝယ် ခေါင်မိုးတွေ ပြန်မိုးလုပ်နေကြတာတွေ့ရတာပဲ။
လမ်းတွေ က ပိတ်နေတော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားလာဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။
ဖုန်းလိုင်းတွေလည်း ပြတ်၊ အင်တနာတွေကျိုးစလောင်းတွေပြုတ်ကျ၊ မီးကမလာဆို တော့ ဘာသတင်းမှ မသိရပါဘူး။
မြို့ထဲ ကိုယ်နေတဲ့နေရာလောက်ပဲ သိရတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေ ဘာဖြစ်ကြတယ်တော့မသိရသေးဘူး။”
ဒီနေ့နေ့လည်က သိရတဲ့ သတင်းပါ...။ ရန်ကုန် ဗဟန်းနားတစ်ဝိုက် အခြေအနေပေါ့...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 3:53 PM
Labels: Nargis Cyclone, Rangoon, Weather, Yangon
ThuHninSee May 5, 2008 at 5:09 AM
အကြင်နာတွေနဲ့ ဖေးကူပါ...။ (မြန်မာ အနုပညာရှင်များ သ...
WhataWonderful and Unfair World ?
History of Fail Efforts (OR) Frustration, False Ho...
Yesterday .... မနေ့က
ွှThis is Myanmar !!! :(
Egg = Hungarian > Steve = Microsoft = Corruption ?...
မြန်မာပြည်ကို မေလ ၂၂ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ဖုန်း ဖရီးခေ...
မုန်တိုင်း နောက်တစ်လုံး လာနိုင်မလား.. သတိထားကြပါ.....
Nargis True Story ...
နေရောင်အောက်က အသက်ရှုသံများ။ Pls Help Myanmar Nargi...
Help Nargis Victims !! (Aid Agencis and Contacts)
Google Helps Myanmar Victims of Nargis Cyclone
Nargis နောက်ဆက်တွဲများ...။ (23:406May '08)
Nargis နောက်ဆက်တွဲများ...။ Update 6
Nargis နောက်ဆက်တွဲများ...။ (May 05 Update)
Nargis Hits Yangon : ရက်စက်ပါ့ နာဂျစ်ရယ်...။
Love Me သီချင်း (သို့)Laptop Sound Card ကို စမ်းသ...
Le Grand Chef (OR) ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက....